5 Linux dzimwe nzira kuWindows 7 | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Kugoverwa, Linux vs. Windows
Mazuva mashoma apfuura, nguva yenyasha yakapihwa neMicrosoft Windows 10 vashandisi yakapera uye izvi zvinoita kuti vashandisi vazhinji vachinje yavo yekare Windows 7 kana kurega kushandisa Windows 10 ye kusada kubhadhara rezinesi kana kungoda kusiya Windows.
Ndosaka tichikuratidza dzimwe nzira shanu dze linux dzekuisa pamakomputa akatengwa neWindows 5. Ndiko kuti, Linux dzimwe nzira dzine zvakafanana kana zvakafanana seWindows 7 panguva yekuvhurwa kwayo zviri pamutemo.
1 Linux Mint, imwe nzira menthol
2 OpenSUSE, imwe linux imwe yevanyanzvi
3 Ubuntu, imwe nzira inonyanya kuzivikanwa
4 Debian, amai vevose
5 KaOS, yakanaka uye yazvino kugovera
6 Mhedziso pane idzi linux dzimwe nzira
Linux Mint, imwe nzira menthol
Kana isu tisina chaizvo hunyanzvi hwemakomputa, Linux Mint ndiyo yakaringana kugoverwa kwedu. Kugoverwa uku kunotora zvakanakisa pane ese maDebian-akavakirwa uye anowedzera mapurogiramu mazhinji akatarisana nemushandisi wevacheche, nenzira yekuti oparesheni yacho iri nyore pane Windows 7. Matsanangurirwo ayo akafanana neWindows 7 kunyangwe Linux Mint inoshanda sisitimu yakachengeteka uye yakagadzikana kupfuura Windows 7 pachayo, chimwe chinhu chinotaura zvakawanda nezvake Haufungi here? Unogona kuwana iyo Linux Mint yekuisa disc pa Iyi link.
OpenSUSE, imwe linux imwe yevanyanzvi
Vazhinji vashandisi vachiri shandisa Windows 7 yekushandisa kwenyanzvi, yehofisi, bhizinesi, nezvimwe ... Kuchinja mashandiro ehurongwa kunogona kushungurudza kune vashandisi, kana zvisina kudhura. Pane dzese linux dzimwe nzira dziripo, unogona OpenSUSE ndiyo yakanakira aya mabasa. OpenSUSE iri linux kugovera iyo yakavakirwa paRedHat Linux, iri bhizinesi chaizvo kugovera. Ichowo chimwe chezvikamu zvakatsiga zvikuru pamwe neazvino software. OpenSUSE ine zvinodikanwa zvakafanana neWindows 7 Kunze kwekuchengetedza iyo inoda imwe chengetedzo kupfuura Windows 7, ndiko kuti, rakakura dhiraidhi. Iwe unogona kuwana iyo OpenSUSE yekumisa mufananidzo pa Iyi link.
Ubuntu, imwe nzira inonyanya kuzivikanwa
Kana iwe uri vashandisi vevashandisi uye iwe usingazive chero chinhu nezveLinux, zvirokwazvo chinhu chekutanga icho Google chakakudzidzisa iwe chinotaura nezve Ubuntu. Ubuntu iri chimwe chezvinhu zvakafanana zvakagoverwa kuWindows, kwete chete kwekureruka kwayo asi kune yayo yakanaka aesthetics uye zvayo zvakafanana zvinodiwa.
Ubuntu ndechimwe chezvinhu zviri nyore zvekugovera nekuisa pamwe neiyo inopa kumwe kugadzikana uye dzimwe nzira dzeWindows. Iyo yakanaka imwe nzira yevashandisi veavice uye zvakare ine LTS vhezheni iyo inosanganisira kutsigira uye kugadzikana kweanenge makore mashanu, chimwe chinhu chisina Microsoft mune ayo masisitimu anoshanda. Unogona kuwana iyo Ubuntu yekuisa mufananidzo pa Iyi link.
Debian, amai vevose
Debian kugovera zvakaomarara kupfuura dzimwe nzira dzekutanga dze linux asi zvakare hwaro hwevose (kunze OpenSUSE). Ndiyo yekugovana yakatsiga uye iyo inoda zvishoma zviwanikwa pasina kurasikirwa nerunako kana mashandiro Yako Nharaunda ndiyo hombe pane dzose uye izvo zvinovimbisa isu kuve neanoshanda system ine ingangoita isina matambudziko asina kugadziriswa, asi zvakare zvakanyanya kuoma kushandisa kupfuura Ubuntu pachayo kana Windows 7. Nekudaro, kana iwe uine ruzivo rwemakomputa, Debian ndiyo inonyanya kukodzera kutsiva Windows 7. Kana iwe uchida kuimisa, unogona kuwana iyo Debian yekumisikidza mufananidzo pa Iyi link.
KaOS, yakanaka uye yazvino kugovera
KaOS iri mugove vadiki iyo inosanganisa zvese zvinoitika zveKDE Project pamwe nekushanda kwakasimba uye kwakadzikama. KDE desktop ine hushamwari kune vashandisi vanobva kuWindows, mune iyi kesi KaOS haina kudaro. Izvo zvinodiwa zvakafanana chaizvo kana zvichienzaniswa neizvo zveWindows 7, asi zvakare KaOS inotipa isu kuti tive neazvino software inowanikwa yekugovera kwedu. Kana iwe uchinyatsotsvaga runako, mashandiro, software yazvino uye kugadzikana, KaOS ndiko kugovera kwako. Unogona kuzviwana kuburikidza Iyi link.
Mhedziso pane idzi linux dzimwe nzira
Kusarudza kugoverwa kweLinux ibasa rakaoma kwazvo. Chinhu chisiri nyore kunyangwe kune avo vari veteran vashandisi veLinux. Senguva dzose sarudzo yakanakisa yekutanga naUbuntu kana Linux Mintkunyange zvakadaro Kana isu tichida kuyedza zvinhu zvitsva ini ndinokurudzira KaOS kana DebianIwe unowana chimwe chinhu chakasiyana kwazvo neWindows 7. Asi chiri pachena ndechekuti kana iwe uchida kuchishandisa yebhizinesi renyika, VhuraSUSE ndiko kugovera kwako pasina kupokana. Pakupedzisira Ndeipi yaunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » 5 Linux dzimwe nzira kuWindows 7
Ini handizive kana kukanganisa kana kuvhiringidzika, asi OpenSuse haina kubva paRed Hat, yakavakirwa paSUSE Linux yaive distro yakatorwa kubva kuSlackware mugore re94. Kana chiri chokwadi kuti inoshandisa RPM inova maneja akagadzirwa naRed Hat, asi izvi hazvireve kuti zvakavakirwa paRed Hat. Ivo vanoonekwa semhuri dzakasiyana mukati meBig 4 (Debian, Slackware, Arch, Red Hat).
Linux yakanyanyisa, inoshanda paavhareji, yakaipa, isingabatsiri pakombuta.
gfa rako haribatsiri
Kana sandwiches haigadzike xdxd
Huya mauro, usaite kuti hupenyu hwako huve shungu mahara. Zvinotaridza kuti hauna kunzwisisa pfungwa yemahara software.
George Romero akadaro
Jhaha mwana mudiki haazive zvaari kutaura
Ramba uchienda shasha
Pindura Jorge Romero
Zvinoenderana nezvaunoda iwe, dai waive mushandisi wewindows iwe ndiwe usingabatsiri
Pindura kune kikeGT
waini yakanaka akadaro
Iwe uri kukanganisa Linux ine simba rakanyanya kupfuura Windows kana Mac, mashandiro ayo chinhu chausingazokwanise kunzwisisa nekusaziva, chiri chakanakisa kupfuura Windows uye unogona kuzviisa mukuda kwako, dambudziko nderekunyepa kwekuti vamwe vanhu kunge iwe unogadzira ... zvakanyanya kushandisa linux zuva nezuva kuti uwane ruzivo ote calllas
Pindura kuna justavino
Iko kune kusashivirira, hupenzi uye kuzvitutumadza kwe "linux" nyanzvi. Kune vanhu vakaita sewe, iyo linux mugove wakasara uye iwe unotenda iwe pachako madzishe uye vamwari vecomputer sainzi. Munhu akashandisa Linux kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu anokuudza. Ibva pagore rako mukomana.
"TORIKI HAZVI DZIDZISWE"
Pane yangu Laptop ndinoshandisa Manjaro, uye parizvino ndakanaka nazvo. Asi ini ndakangoisa inozivikanwa Linux Mint pakombuta uye iri kufamba zvakanaka. Iye pachake akataura kuti inomhanya yakawanda uye inotaridzika uye anoifarira, kunyangwe akaishandisa chete kusefa internet nekutamba minetest kana supertuxkart, yatove nhanho kumberi uye imwezve linuxer. Munguva pfupi ndichaisa Linux Mint palaptop yehanzvadzi yangu kuti ndione kana achiifarira.Chinyorwa chakanaka, kwaziso.
Tonino yannarella akadaro
Zvekushandisa bhizinesi ini ndinokurudzira Debian uye yevashandisi vekumba Ubuntu kana Linux Mint.
Pindura Tonino Yannarella
Ini ndinoshandisa linux mint: v
Ini ndinoshandisa Debian wheezy palaptop yangu pabasa uye Jessie pane yangu laptop.
Iyo desktop imwe inoshandisa peppermint uye ini ndine rasipiberi ine raspbian. Linuxero 100%. ;)
Pindura kuna jose.cortesde
Kwete kutaurwa kweMageia ??
Pindura kuna Pepo
Ini ndinoshandisa lubuntu, zvakafanana zvinoenda powerpc pane ine 2000 pc.
unogona kubiridzira zvakafanana !!!!
Ndakaenda kubva paWindows 7 kuenda kuLinux Mint Debian Edition uye ndichifara kwazvo, ndinoikurudzira.
Zvinotaridza kwandiri kuti dambudziko nderekuti windows inogadziridza kune mushandisi chero zvazviri uye linux haina kushata, iwe unongofanirwa kutsvaga iyo inokodzera zvaunoda, ndakaedza mint uye ubuntu uye ndakavada chaizvo. yediki madhiri ini ndinoda mbwanana, slax uye lubuntu
Pindura ku willigm
inova ndiyo inonyanya kukurudzirwa kune diki, isina simba rakanyanya. Vakandiudza kuti windows 7 inoshanda mushe, asi ini ndoda kushandisa linux kana yemahara software imwe nzira
Antonio Castellanos chigadziri chemufananidzo akadaro
Xubuntu inokodzera iwe, kana Linux mint xfce, ese ari maviri akaderera zviwanikwa anodya Julia
Pindura kuna Antonio Castellanos
Ini handizive kuti nei pasina munhu anokurudzira Fedora, kwandiri ini akatsiga uye akavimbika (ziso ndiwo maonero angu). Kwaziso
Fedora kana Manjaro havana chakaipa ... asi; Ungavakurudzira zvakanyanya kune mutsva muWindows?
Ndiri kudzidza Linux, ndanga ndichishandisa windows kwemakore akati wandei asi ini ndinoona kuti hapana kuwirirana mune maitirwo, vamwe vanoti zvakamira seizvi ... vamwe vanoti hazvina kudaro ... saka vanhu seni ini ndichiona ichi sehuku yehuku uko munhu wese anodanidzira uye pasina munhu ari pachokwadi, kune rimwe divi, zvichaitwa sei mune ramangwana kana mushandisi achida Linux kana achifanira kushanda nayo asi asingazive chero chinhu nezvecomputer science? Iko kusahadzika kunomuka, regerera kusaziva kwangu
Dambudziko nderekuti (sezvawataura iwe pachako) unobva kuWindows uko kunongova nenzira imwe chete yekuita zvinhu; nepo muLinux "mudzidzisi wese aine bhuku rake."
Onazil Sagles akadaro
Ndiri kuda mashandiro ebasa rangu uye ndinoda linux sezvo ini ndaona mune dzakawanda zvirevo kuti zviri nani, asi ini hapana chandinoziva nezve linux, ndiko kuti, ini ndoda (ndoda kutanga) chimwe chinhu chine simba kune sainzi uye nhoroondo yebhizinesi asi ini handishamise zvakanyanya, iwe unokurudzira chii?
Pindura Onazil Sagles
Mushure mekuyedza ese OS ataurwa uye nevamwe, ndinonamira neChaletOS
Uye zvakadiniko nezve peppermint OS?
Yakanaka kugadzikana dhizaini uye haina kunyanya kurema. Yangu Linux ruzivo rwakatanga muna 2009 neUbuntu. Ipapo ndakaenda kuna Lubuntu asi zvairema uye zvisina kugadzikana kupfuura zvavaitaura saka ikozvino ndagutsikana nepepermint. Kune imwe komputa yekare kwazvo ine 512 GB ye RAM ndinogutsikana neQ4OS, distro yakanaka kwazvo neTrinity Graphics Environment. Zvinoita sekunge ndine Windows XP. Ini ndinoikurudzira kune avo vane yakaderera-mari PC.
Fluid asi yazvino.
Pindura kuna Ninux